Waxyaabaha Keena ama Sababa Niyad Jabka |
Haddaad tahay ruux dareemadiisu inta badan ka buuxaan. Niyad jab baahsan. Waxaa laguu hayaa dhowr arimo oo sababaya in
Badanaa Niyad jabku waxaa sababa In qofku uusan ogaan baahiyaha ka maqan ee Niyad jabku ku abuuraya ka gudub maantaba Niyad jabka adigoo maskaxdaada u fiirsanaya fariimaha ay kuugu baaqayso.
niyad jab kugu yimaado. Niyad jabku waa farriin sida qofku uu u dareemo gaajada, harraadka, oonka iyo dhibtaba ayuu qofkuna u dareema niyad jabka waana fariin qofka ku amraya inuu ficilo sameeyo kuwaa oo tusaya inaanu qanaaca jidhin.
Hormoonka Serotaniin oo jidhkaaga ku yaraada waxay kugu kalifeysaa niyad jabka sida aad kaga bogsoon kartaana waa adigoo jimicsi iyo jiim sameeya cunnooyinka carbon hydrate-kana isticmaala qaatana iftiinka cadceeda.
In aad u kuur gashaa dhibta kugu aguuman waa adigoo ogaada halkuu niyad jabku kaaga yimi waxaad baadhitaan ku sameysankartaa nafaada adigoo u kuurgalaya waxa kaa qaldan ee naftaada hoos u dhigaya qalbigaagana jabinaya.
15 qalad oo burburinkara nolosha qofka
Badanaa qofka qaladkiisa waa in uu wax ka gartaa balse waxaa kaba sii fiican in qofku uu wax ka barto qaladaadka kale ee dadku galaan taana waxay u sahleysaa in qofku uu waxbadan oo qaladaad naftiisa u keeni lahayd uu ka feejignaado hadaba Waxaa jidha 15 qalad oo dadku galaan inta noloshoodu jirto waxaana kamida.
Waxaa jidha dad ka fekera mustaqbalkooda xilliga 23, 25 ilaa 30 jirnimada ah hayeeshee taa waa qalad waxaa loo baahanyahay in qofku mustaqbalkiisu ka fekero markuu yahay 15 ilaa 20jir Waxaa laga yaabaa in qofkaasu u sahlanaato sheeyo badan uu qorsheystay.
In qofku uu guursado asagoon kaba war heyn baahiyihiisa gaarka waayo qofku hadduu guursanaayo waa innuu helaa qofkii la dhammeystiri lahaa nolosha kaba soo qaad ‘wiilow waxaad guursatay gabadh, adna gabarey waxaad guursatay wiil hadana aanan dabooli kareyn baahiyahaagii rasmiga taa badalkeedana waxaa wanaagsan in qofku guursado xilli uu ogyahay ruuxa naftiisa ku haboon sababtoo ah qofkan noloshiisa ku lamaanan waa inuu ahaada qof dareemi kara habdhaqankiisa.
3. Waxa jidha dadka qaar oo inta badan ku celceliya shey ama wax aanan u suurtoobin taasoo qofku ku sababta in uu ka qaado stress ama welwel badalkeedana qofku waa inuu dhaqdhaqaaq nololeed uu sameeyaa waayo Sida habeenka iyo maalinku isku badalo Ayuu waqtiguna u dhaqaaqa marka waxa loo baahanyahay in qofku sheygii aan u suurtoobin midkaloo ka macquulsan raadiyaa ama uu fuliyaa.
4. Qofkii oo aan isbad badal lahayn Inta badan waxaan aragnaa dadka qaar oo shaqo xiisa u haye haddana ka gadaal ku adkaata markuu dhowr mar joogay goobta ama ka caajisa taana waxaa keeni karta Isbad badal la’aanta kawaran manta ma noqonkarto biri biritooluna noqon meyso shaley sidaasi si lamida ayaa laga yaaba inaad is badal badal ku muujiso jawi maalmeedkaada caadiga adigoo soo kordhinkara waxyaabo cusub.
5. Adigoo gaabis ah dadkana ka dambeeya inaad gaabis ahaata Waxay kuu horseedeysaa inaadan horu-usocod lahayn.
6. In qofku moodo waqtigu inuusan xawli ku socon haddii aan soo koobno waa caajiska wahsiga iyo xaalad kastoo curyaami karta saan qaadkaaga.
7. Adigoo aamina ama rumeysta in dadka awoodaada liidaya ay hoos kuu dhigaan taasna waxay kugu hogaamin doontaa gud cur iyo kalsooni la’aan
8. Qofka oo ka quusta hamigiisii iyo rajadiisii waxayna ka dhigantaa in qofkaasi noloshiisi daciifiyey badalkeedana samey inaad rajo uun lahaato adigoo kaashanaya Rabbigii dunida ku dul keenay laga yaabe in Maalin kamaalin kuu rumoobaan rajadaada
9. Adigoo u arka Sida farxadaadu tahay in dadku ay u tahay Taasna Waxbadan Waadku silci doontaa Ee marka hore Waa in qofku uu fahmaa Furayaasha farxadiisa
10. Haku dhicin dabinka qibradda In qofku uu qibrad yeesho maahan Inuusan lacag lahayn ama heleyn Ee waa in Qibradaada ku meelmartaa adigoon dooraneyn kaliya qibrada kugu jirta Waa inaad lacagna doorataa.
11. Adigoo ka rajo dhiga hiwaayadaada ama waxa aad doorbideyso haddii ay dadku qaar kuu sheegaan in ay kaaga wanaagsantahay waxbarashada Waxa aad jeceshahay waxay noqoneysaa inay kaa hor istaagto rabitaankaagi badalkeedana Waxa aad guul ku gaari kartaa Waxa hiwaayadaada ah laakiin waa haddey yihiin wax naftaada hormarinkara.
12. In qofku hoos u dhigo hamigiisa waxa uuna qofkaasi ku dambeyn doonnaa In waqti ka dib uu lumiyo hamigiisii
13. In qofku u fahmo in xirfadaha la barto balse aanla dhaxlin Waxaa jidha dad kaa xirfad badan hayeeshee maaha inay dhaxleen Waa inay barteen oo kaliya
14. In loo maleeyo in guushu ay udhacdo si dhaqsa ah waa macquul in guushu ay u dhacdo laakiin tilmaanta guusha ayaa ah In waqti badan ay qaadato.
15. Qofka oo joojiya inuu dhaqaaq sameeyo tani waxay la macno tahay adigoo dhul saxara dhex yaal balse kawaran hadaad sii dhex fadhido laga yaabe inaad ku dhimato waxayna ififaalo ka tahay nolosha oo ah In qofku sameeyo dhaqdhaqaaqyo noloshiisa ku aadan asagoo sameynkara fikrado kala duwan oo maskaxdiisa ku jirta.
Fursad sii maskaxdaada si aad u hanato calanka horumarka.
Tags: Waxyaabaha Keena ama Sababa Niyad Jabka
Next post Murti Tiroleey ah 'Labo Ma Labo yara'
Previous post Caalamahdaha Lagu Garto Qabsinka, Maxaana Sababa Qabsinka?
May 4, 2019 at 7:54 pm	— Reply
Mashaa- Allaah aada ayaan jaga faaiday maqaalkan mahadsanid ismaaciil guuleryso.